“Ny Araben’ny Androany” Zava-misy ao Tokyo Asehon’ilay YouTuber Mimei · Global Voices teny Malagasy
"Aesthetic is what I aim for."
Voadika ny 01 Avrily 2018 14:09 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Ελληνικά, македонски, 繁體中文, русский, Español, Deutsch, Français, عربي, Italiano, English
“Ny kafe an'i Takashi Murakami, gacha hafahafa & vilaogy tazan'i Nakano an'i Tokyo”. Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube an'i Mimei.
Miaraka amin'ny fanehoan-keviny mavitribitrika sy tia namana amin'ny tontolon'ny mozika mamelombelona ao Tokyo, mampiseho ireo arabe isan-karazany ao amin'ny tanànan'i Japana be mponina indrindra, iray isan'andro ao ny amin'ny YouTube, Instagram, Twitter ary tambajotra media sosialy hafa i Mimei bilaogeran-dahatsary malaza monina ao Tokyo.
Nanatevin-daharana ilay tranonkala fizarana lahatsary i Mimei tamin'ny taona 2010, izay avy any Auckland, Nouvelle Zélande rehefa avy nonina tany Japana nandritra ny herintaona, sary notifiriny manokana izay atolotra ho an'ny mpijery Japoney ankehitriny ny “Mimei Land (Tanin'i Mimei)”.
Malaza ihany koa ny kaonty Instagram an'i Mimei, manasongadina ny sarin'i Tokyo sy ny toerana hafa.
Ankoatra ny fitrandrahana ireo harena miafina ao Tokyo, manasongadina lahatsary mitrandraka ireo toerana hafa mahaliana ao Japana ihany koa ny Mimei Land, anisan'izany ny Lapa Himeji sy ny serfa malaza ao Nara.
Manampy ny hakanton'ny lahatsary ny zava mahaliana manokana an'i Mimei, amin'ireo lohahevitra samihafa manomboka amin'ny sakafo tsy misy hena ao Tokyo, manandrana ny milina fivarotana gashapon hafahafa (kilalao kapisily), sy manandrana ny zava-pisotro farany navoakan'ny Starbucks Japan. Nolanjalanjaina niaraka tamin'ny vilaogy (bilaogindahatsary ) madinika mampiseho ny vadiny, Japoney mpiray tanindrazana aminy mpisera Youtube PDR-san, ary saka telo ny fientanentanana tamin'ny fandraketana ny zava-niainany tany Tokyo.